'Diinteyda darteed ayaan uga haray "fashion-ka"'
Monday January, 18 2021 - 09:37:22
Thursday November 26, 2020 - 09:56:51 in by salman abdi
Xaliima Aadan oo ku caan baxday xayeysiinta dharka iyo waxyaabaha kale, ayaa shaacisay inay ka hartay tartannada fashion-ka, maadaama uu meel ka dhac ku yahay Diinta Islaamka.
Gabadhan ka dhooftay xerada qaxootiga ee Kakuma, haatanna ku nool Maraykanka, ayaa farriimo ay soo dhigtay baraheeda Twitter iyo Instagram waxay ku sheegtay "inay nafteeda ku dhaliileyso xoogga ay saartay fursadda ay ka heshay fashion-ka, oo ay hilmaamtay waxa uu u horseedi karo,"
Xaliima oo kamid ah gabdhaha ugu horreeyay ee fashion-kooda ku soo bandhiga xijaab ayaa sheegtay in ku tagtay waddo lunsan, mararka qaarna aysanba salaadda tukan jirin.
Farriin kale oo ay soo dhigtay ayaa waxa ay uga hadashay inay garab la'aan ku heshay mihnaddaas, isla markaana aan fahan wanaagsan laga qabin dumarka xijaaban iyo dowrka ay ka qaadan karaan fashion-ka.
Xaliima ayaa sheegtay in hooyadeed ayay marar badan ka codsatay inay ka harto mihnaddaas, waxaana ay tilmaantay in "ugu dambeyn ay ku guulaysatay".
"Hooyaday waxa ay sabab u tahay guulaha iyo farxadaha aan gaaray. Yoolkeyga cusub ayaa ah inaan farxaddeeda ka shaqeeyo," ayay barteeda Twitter ku qortay.
XIGASHADA SAWIRKA,FADIL BERISHA
Xaliima ayaa sheegtay in aanay Diinteeda u dayici doonin fashion-ka.
Waraysi ay BBC Somali siisay dabayaaqadii 2019 xilligaas oo ay booqasho ku joogtay Kakuma ayaa waxa ay uga hadashay sida ay isugu dheellitirto shaqadeeda xayeysiinta iyo Diinteeda Islaamka.
"Ma jirto haweeney lagu qasbi karo inay xijaab xirato mana jirto haweeney lagu qasbi karo inay iska dhigt xijaabka", ayey tiri.
Xaliima ayaa indhaha caalamka soo jiidatay markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee iyadoo xijaaban kasoo muuqatay majalladda Vogue.
"Waxaan rabay inaan soo laabto oo aan gabdhaha kale u sheego inay dabaal aadi karaan iyagoo dharkaas xiranaya, si ay ciyaaraha uga qeyb qaataan", ayey tiri.
Xilligaas waxyar kadib waxay qandaraas la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dhinaca xayeysiinta, oo lagu magacaabo IMG models.
Doorashada Biden: Mike Pence 'oo soo dhaweeyay' iskudayga senatarrada ay ku carqaladaynayaan natiijada
04/01/2021 - 10:12:17
Tanaasul Maka Samaynayaan Doorashada Madaxtinimada Mucaaridka Somaliya
02/01/2021 - 15:13:33
Laamaha Amaanka Laascaanood Oo Ka Hadlay Qaabkay Uga Hor Tegayaan Dilalka Qorshaysan
23/12/2020 - 19:21:14
Haweenka Somaliland Hadii Ay Ku Soo Baxaan Golayaasha Dalka Maxay Qabanayaan
06/12/2020 - 13:26:47
Afhayeenka Kulmiye Oo Faahfaahiyey Dadaallada Ay Xisbi Ahaan Kor Ugu Qaadayaan Saamiga Haweenka
06/12/2020 - 13:19:05
"Waxa Aynu Bedeli Doonaa Kii Shalay Lahaa Sheekh Aadan Siiro, Ayaannu U Habaynay Laba Baloog…" Faysal Cali Waraabe
29/11/2020 - 14:57:07
Fanaan Hore Maxamed Mubaarig '' Dadku waxay is waydiinayaan Fanku Dib Ugu Noqonayaa ''
15/11/2020 - 11:42:20
"Dagaalkii Uu Farmaajo Keenay Tuke-raq, Ka Uu Ka Wado Buuhoodle Badhan Inaanu Xamar Geyno Ayaanu Doonaynaa" Faysal Cali Waraabe
04/11/2020 - 11:09:04
Halkee wax marayaan maalintii u danbaysay ololaha doorashada Maraykanka
02/11/2020 - 10:00:11